100 Euro karama ho fankatoavana ny fiaraha-monina! | safidy
Ho an'ireo mpikambana mavitrika ao amin'ny vondron'olona dia misy vidiny aza. Fehezo fotsiny ny varotra amin'ny fivarotana ho an'ny fiarahamonina, dia hiverina aminao izahay.
100 Euro karama ho fankatoavana ny fiaraha-monina! betsaka
Sokajy: Community fankatoavana
Fepetra: Alohan'ny handoavanao vola dia tsy maintsy alefa aminao ny sarany. Mety handoa hetra aminao ny haba.
Voafetra amin'ny sarany 10 amin'izao fotoana izao ny tolotra, saingy hitohy tokoa. Hisy valisoa sarobidy kokoa noho izany. Ireo fandaminana sy olona mametraka antony arak'asa matihanina dia esorina. Ny dingana ara-dalàna dia esorina.